Bold News အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » Bold News အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
* ﻿New York နဲ့ San Francisco မြို့တွေမှာ ပြသပြီး ရုံပြည့်အားပေးမှုရခဲ့တဲ့ ” မီ” ရုပ်ရှင်ကား။
* San Francisco နဲ့ Fort Wayne မြို့က ၃၁ကြိမ်မြောက် ရှစ်လေးလုံးအမှတ်တရအခမ်းအနားများ။
* မြန်မာနိုင်ငံရေဘေးနှင့်သဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် San Francisco, Los Angeles. Fort Wayne မြို့တို့က အလှူရန်ပုံငွေပွဲများ။
* AWCLA’s(LA) ရန်ပုံငွေစျေးရောင်းပွဲတော်။
* U.S. သို့ ခေတ္တကြွရောက်လာသော ဒယ်အိုးဆရာတော်၏တရားပွဲများ။
* မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောမိသားစုနှင့်ကျနော်တို့မိသားစု ဆောင်းပါး။
* တိမ်မည်းရဲ့ ဇော်ဂျီမှယူနီကုတ်သို့ ပညာရပ်ဆောင်းပါး။
* မောင်မိုးညိုရဲ့ အမေရိကဝင်ပေါက်တံခါးတင်းကြပ်စပြုနေပြီလော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါး။
* ဝင်းဗိုလ်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိတဲ့ Hotel California ဂီတဆောင်းပါး။
* မိုးနတ်သူဇာသီတာဝင်းနဲ့ အမေးအဖြေ။
* ခင်မောင်အေး(Azusa) ရဲ့ တွေးတစိမ့်စိမ့်ဟာသ။
* လစဉ်ဖော်ပြနေကျ ဆရာမျိုးကျော်မြင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ကျန်းမာရေးပညာပေးဆောင်းပါးများ၊ ဗေဒင်၊ သုတရသစုံလင်စွာ လစဉ်ထုတ်မြန်မာ့ဂဇက် ၂၀၁၉၊ စက်တင်ဘာလထုတ် ထွက်နေပါပြီ။ မြန်မာဆိုင်များမှာ အခမဲ့ရယူပါ။
“စစ်ပဲဖြစ်မလား.. ၊ မဖြစ်ပဲ.. စစ်ပြီး(စစ်ဆေးရင်း…စစ်ဆေးရင်းပြီး) ကြမလား…”
… ‌ဆော်ဒီသူဌေးနိုင်ငံ.. ထရီလီယန်ချီချမ်းသာတာ.. သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့.. ‌ငွေထုတ်ပေးရင် စစ်ပွဲလုပ်မယ်လို့ ထရမ့်ကတော့.. ပြောဖူး..
အစ္စရေးကလည်း.. ‌ခုကာလက.. ရွေး‌ကောက်ပွဲရာသီကြီး..။
ရေနံတွေစျေးတက်တော့.. အမေရိကားက.. ‌‌မြေကြီးထဲက..ရေနံတွေအကုန်ထုတ်ရောင်း.. ၊ ကမ္ဘာ ရေနံအထုတ်ဆုံးဘွဲ့ ‌ကောက်ဆွဲ..၊ ချိုင်းနား-အမေရိကားကုန်သွယ်စစ်ကို ‌ပိုထွက်လာတဲ့ငွေနဲ့ဖိ… အနိုင်ယူ..။
ထရမ့်အတွေးမှာ.. ဟုတ်လို့တော့.. နေတာပါပဲ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ‌တိုက်ခိုက်မီးရှို့ခံရတာက.. ‌ဆော််ဒီရေနံမြေ..စွမ်းအင်ထုတ်ရာ‌နေရာကြီး.. ကမ္ဘာ့ရေနံရဲ့ ၅% ထုတ်နေတာကျသွားသမို့.. ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့. ဂွိ..။
“သမ္မတကြီးထရမ့်ရဲ့ အခွန်ဆောင်ရှင်းတမ်း ၈နှစ်စာကို ရုံးတင်ပြဖို့.. ဆင့်ခေါ်ရ”
ပြည့်တန်ဆာမလေး စတုန်းမီနဲ့.. ပလေးဘွိုင်းမိုဒယ်မ ကို ‌ငွေပေးထားတာပြန်စစ်ဖို့.. ဘာဘာညာညာ‌တွေစစ်ဖို့.. ထရမ့်ရဲ့ အခွန်ဆောင်ရှင်းတမ်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၈နှစ်စာကို ရုံးတင်ဖို့.. နယူး‌ယောက်တရားရုံးကနေ.. ဆင့်ခေါ်ခံရပါတယ်..။
ထရမ့်က နယူး‌ယောက်-မဟာတန်မှာ‌ အမြဲတမ်းလိပ်စာထား.. နေသူမို့.. သူ့မူလဌာ‌နေက.. ဆင့်ခေါ်တာပါ..။
အမေရိကားမှာ အမေရိကန်တိုင်း(တိုင်း) နှစ်စဥ် အခွန်ငွေဆောင်..ရှင်းတမ်းတင်ကြရတာပါ..။
အဲဒီမှာ နှစ်စဥ််လုပ်ခဲ့သမျှ ‌ငွေပေး‌/ငွေယူတွေပါသမို့.. ပါရသမို့.. အဲဒါစစ်ရင်.. ပိုင်ဆိုင်မှု.. ‌ငွေပေး/‌ငွေယူအကုန်ပေါ်ပါတယ်..။
သမ္မတကြီးက.. ဘာ‌ကြော့င့်မှန်းမသိ.. သမ္မတဖြစ်လျှက်နဲ့.. သူ့ အခွန်ရှင်းတမ်းကို တရား၀င်မထုတ်ပြန်ပါ..။
အဲဒီတော့.. သူဘယ်လောက်ချမ်းသာ.. ဘာအကြွေးရှိ..။ ဘာလဲ.. ဘယ်သူမှ တရား၀င်မသိ..။
ဘယ်လိုရှင်းမယ်မသိ…။ ‌ပေးဘူး..‌ပေးဘူးကွ.. လုပ်ချင်လည်းလုပ်ဦးမယ်ထင်၏..။
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ.. ‌ရွေး‌ကောက်ခံရပြီးသူ/သမ္မတ(အကြီးဆုံးရာထူးရှင်) ဟာ.. အာဏာရှင်တပိုင်းပဲမဟုတ်ပါလား..။
“Yang တို့.. ရမ်းနိုင်မှတော်ကာကျမယ်ခေတ်..”
အမေရိကန်တယောက်ကို တလ ‌ဒေါ်လာ ၁၀၀၀/တနှစ်၁၂၀၀၀ ဘာမှလုပ်စရာမလိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့.. UBI စနစ်ကို ဖန်တီးမယ့်.. မစ္စတာရမ်းက.. ‌အေရှန်းဇာတိနွယ်ပါ..။
သမ္မတဖြစ်ရင်.. သမ္မတအိုဘားမားရဲ့.. လူမည်းပထမသမ္မတလိုပဲ.. ‌အေးရှန်းပထမသမ္မတဖြစ်မှာပါ…။
ဖိုဘီလို သတင်းဌာနကတော့..မစ္စတာရမ်းဟာ.. ထရမ့်ကို ဘယ်လိုဘိ Beat နိုင်တဲ့..သူပါလို့ဆိုပါတယ်..။
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ပြောရရင်.. ၂၀၂၀ မြန်မာနိုင်ငံရွေး‌ကောက်ပွဲမှာ.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီများ.. မြန်မာတိုင်းကို တလ.. ကျပ်၁သိန်းထုတ်ပေးတာမျိုး.. နဲ့..မဲဆွယ်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားဘူးလားမသိ..။
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် လူဦးရေ ခြောက်သန်းကျော်ရှိသည့်အနက် တရုတ် ၉၇၀၀၀ ကျော်နှင့် ဘင်္ဂါလီ ၆၀၀၀၀ ကျော် နေထိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း လူမှုရေးဝန်ကြီးပြောကြား
“ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းနဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအလိုက် လူဦးရေက ဗမာ ၅၂၁၀၉၂၂ ဦး၊ ကရင် ၂၄၃၇၂၂ ဦး၊ ရခိုင် ၇၂၃၉၅ ဦးတို့ နေထိုင်ပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ကချင် ၉၁ဝဝဦး၊ ကယား ၂၂၇၄ ဦး၊ ချင်း၂၃၆၄၈ ဦး၊ မွန် ၃၁၇၂၆ ဦး၊ ရှမ်း ၃၅၈၂၅ ဦးတို့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သန်းခေါင်စာရင်းဖြင့် နေထိုင်ကြောင်း၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၅၆၂၉၆၁၂ ဦး နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောကြားသည်။
“အခြားမျိုးနွယ်စုများအနေနဲ့ အိန္ဒိယ ၂၂၇၇၄၀ ဦး၊ ပါကစ္စတန် ၁၅၁၃၃ ဦး၊ တရုတ် ၉၇၉၉၄ ဦး၊ မုံးဝန်း ၄၇၇ ဦး၊ ကိုးကန့် ၁၈၂၄ ဦး၊ ခိုလုံလီလျှော ၁၄၅ ဦး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၇၄၀ ဦး၊ ဘင်္ဂါလီ ၆၃၅၅၃ ဦး၊ နီပေါ ၂၁၈၂ ဦး၊ အခြား ၄၇၉၁၇ ဦး စုစုပေါင်း ၄၅၇၇၀၅ ဦး နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ လူမျိုးအလိုက် လူဦးရေ ၆၀၈၇၃၁၇ ဦး နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့ဂဇက် (သတင်းစာ) အမေရိကားမှာ